Adora & etc.: May 2014
စာလာဖတ်ကြတဲ့ မမ နဲ့ညီမလေးတွေကို စလုံးမှာ ဟိုးတလောလေးကမှ ဖွင့်တဲ့ ကိုရီးယား အလှကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်တမျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Innisfree တဲ့။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး jeju islandက သဘာဝပစ္စည်းတွေသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သုံးဖူးကြပြီလားမသိဘူးနော်။ အောချက်လမ်းမပေါ်က တာကာရှီးမားရားကုန်တိုက်အောက်ထပ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပါ။ ဒီတံဆိပ်နဲ့ကျမကိုမိတ်ဆက်ပေးတာက ကျမသူငယ်ချင်းပါ။ ပစ္စည်းတွေအမျိုးစုံ၊ အရေအသွေးကောင်းပြီး ဈေးနှုံးအရမ်းချိုလို့ သွားကြည့်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းတာနဲ့ ရုံးအားရက်တရက်မှာသွားကြည့်တာ... ဒါတွေပါပြီးပြန်လာပါတယ်။Clay mask ကလွဲလို့ကျန်တာတွေအားလုံး ၁၀ဒေါ်လာ မကျော်ပါဘူး။
( Prouct ပုံတွေကို Google ကယူပါတယ်)
Jeju Gardenia hand cream 30 ml
Innisfreeဆိုင်ထဲဝင်ဝင်သွားချင်း ကျမအရင်ဆုံးသွားတာ hand cream counter ပါ။
hand cream အကြောင်းတော့အထူးတလည်မိတ်ဆက်စရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများ အိတ်ထဲမှာ အိတ်ဆောင် hand cream လေးတွေပါလေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လေအေးပေးစက်တတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာတနေကုန်ထိုင်အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက် အသားအရေအရမ်းမခြောက်အောင် moisturizing lotion တွေလိုပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောအရောင်တွေနဲ့ အနံ့တွေကြား ကျမနှစ်သက်မိတာ sea butterနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အဝါရောင် Jeju Gardenia hand creamပါ။ အနံ့က စပြီးလိမ်းလိမ်းခြင်း ပြင်းသလိုထင်ရပေမဲ့ ခဏလောက်ကြာတဲ့အခါ ပြေလာပြီးအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိသင်းသင်းလေးနဲ့ မွှေးနေတော့တာပါပဲ။
1 min lip scrub 9g
နှုတ်ခမ်းအတွင်းသားတွေခြောက်တတ်လွန်းလို့ scrub လိုချင်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ ရုံးမှာ Laura Mercier ကနေပြီးလုပ်တဲ့ personal grooming သင်တန်းမှာ လူတိုင်းကို သူတို့ရဲ့ laura mercier lip scrub ကိုပေးသုံးကြည့်ကတည်းက ကြိုက်သွားတာလေ။ လိုချင်လို့ရှာကြည့်တော့ ၁၁ဂရမ်ကို စလုံး ၂၂ဒေါ်လာကြပါမယ်။
sephora မှာဈေးချိုတာများရှိမလားလို့ရှာတော့ Fresh sugar berry lip scrub spf15 နဲ့ Fresh sugar lip polish ကိုတွေ့ပါတယ်။ ဈေးကလဲ တခုကို စလုံး၃၀နီးပါးပါ။ အနံ့ကလဲ ကျမအနေနဲ့ပြင်းသလိုခံစားရပါတယ်။ Fresh sugar berry lip scrub spf15ပါတာကိုလဲသိပ်နားမလည်ပါဘူး။ scrubဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီလိုဆိုးထားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေနဲ့ဆေးရတာမျိုးဆိုတော့ spf ပါပါမပါပါ သိပ်မထူးဘူးလားလို့။ Packaging ကတော့လှပါတယ်။ ကြေးနီရောင် နှုတ်ခမ်းနီတောင့်လေးပါ။ ပုံမှန် နှုတ်ခမ်းနီတောင့်အရွယ်ထက် နဲနဲလေးသေးပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ဒီ ၃ဒေါ်လာနဲ့ ပြား၅၀ပဲကျတဲ့ Innisfree 1 min lip scrub ကိုတွေ့တော့ ဘာမှမစဉ်းစားပဲ ဝယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အစမ်းသုံးဘူးတဲ့ laura mercier lip scrub လိုပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းအတွင်းသားက ခြောက်နေတာတွေပျောက်သွားပါတယ်။ အညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း ၁မိနစ်လောက် ဖြေးဖြေးချင်းလက်ညိုးနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတလျှောက်လိုက်ပွတ်ပေးတော့ နှုတ်ခမ်းတခုလုံး ပန်းရောင်သန်းပြီး နုညံ့သွားပါတယ်။ အနံ့လဲမရှိပါဘူး။ ကျမလိုပဲ နှုတ်ခမ်းခြောက်တတ်ပြီး lip scrubကိုစမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒါလေးညွှန်းပါရစေ။
Apple Juicy Eye makeup remover 100ml
Eye makeup remover ကိုဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ သုံးလက်စ ဗူးကမကုန်သေးတဲ့အပြင် Johnson baby oil တဗူးလဲအသစ်ကြီးရှိသေးတာဆိုတော့ဝယ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ( Johnson baby oil က Eye makeup remover အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်၊ ကလေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်လုံးနားကနုညံ့တဲ့အသားအရေတွေ အရေးအကြောင်းမထင်၊ မပျက်စီးဘူးလို့အလှအပ blogတခုမှာဖတ်ရလို့သုံးကြည့်ဖို့ဝယ်ထားတာပါ။)
ဆိုင်ထဲက eye shadows အရောင် လက်မှာလျှောက်စမ်းကြည့်ရင်းဖျက်ဖို့လိုလာတော့ ဆိုင်မှာထားတဲ့ testerကိုယူသုံးရာကနေ ပန်းသီးအနံ့လေးသင်းနေတဲ့ Apple Juicy Eye makeup remover ကိုဝယ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
သူငယ်ချင်းက သူစမ်းသုံးကြည့်လို့အရမ်းကြိုက်ပြီး ကျမကိုဒီဆိုင်သွားဖို့တိုက်တွန်းတာ ဒီ Clay Mask ကြောင့်ပါ။ ဒီMaskကိုဆိုင်ရှေ့မှာ Best Sellerအဖြစ်ကြေငြာထားပါတယ်။
ဗူးပေါ်မှာ ပထမဆုံးမြင်တဲ့စကားလုံးက"Volcanic" ပါ။ ကျမအနေနဲ့တော့ မျက်နှာပေါ်က နုညံ့တဲ့အသားအရေထိမ်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေထဲ ဒီလိုပူပူလောင်လောင်ချော်ရည်တွေ ဘယ်လိုပါမှန်း၊ ဘယ်လိုအကျိုးပြုမှန်း နားမလည် ညဏ်မမှီပါဘူး။ ဆိုင်ကအရောင်းစာရေးအမလေးကို မေးကြည့်တော့မှ ဒီရွှံစေး mask ထဲမှာ jeju island မီးတောင်ပေါက်ကွဲတုံးက ကျလာတဲ့ ချော်ရည်ပူတွေခဲသွားရာကနေရလာတဲ့ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရောအနှောတမျိုးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ထူးခြားပြီးရှားပါးတဲ့ ဓာတ်တမျိုးက အသားအရေပေါ်က ချွေးပေါက်တွေထဲဝင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသန့်စင်စေတဲ့အပြင် ချွေးပေါက်ကျယ်တာတွေ၊အဆီပြန်တာတွေကိုလဲ သက်သာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တချို့သော အသားအရေတွေအတွက်မသင့်တော်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကနေထုတ်ထားတဲ့အဆီမျိုး၊ သဘာဝမဟုတ်ဘဲ တုပပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စ္စည်းမျိုး၊ ဓာတုပစ္စ္စည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ ethanol၊ ပြီးတော့ mineral oil မပါဝင်ပါဘူး။ Ethanol ကိုအများအားဖြင့်အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက်ထုတ်တဲ့ skin care အမျိုးအစားတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ethanol မှာအရက်ပါဝင်မှုရှိတဲ့အတွက် အရက်နဲ့မတဲ့သောသူများအဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လိုတာထပ်ပိုပြီးပဏာမများရင် အသားအရေခြောက်သွေ့စေတယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။ Mineral oil ကိုအပင်တွေကနေထုတ်ယူတယ်ဆိုပေမဲ့ အနံ့တွေ အရောင်တွေဘာမှမကျန်အောင် အဆင့်ဆင့်သန့်စင်ရာကနေသူ့ရဲ့သဘာဝသတ္တိတွေ မကျန်သလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ Mineral oil ကဝက်ခြံပေါက်တတ်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက်မသင့်တော်ပါဘူး။
ရွှံစေးအရောင်ကမီးခိုးရောင်ပါ။ ဝယ်ပြီးကတည်းက ဒီနေ့အထိ သုံးတာ ၃ကြိမ်ရှိပါပြီ။Cooling effect ပါတဲ့အတွက် mask တင်ထားတဲ့ ၁၀-၁၅မိနစ်အချိန်အတွင်းမျက်နှာတခုလုံးအေးနေတာပါပဲ။ ပထမ တခါ၊နှစ်ခါမှာသိပ်မသိသာသလိုထင်ရပေမဲ့ ၃ခါလောက်သုံးအပြီးမှာ ကျမမျက်နှာဖြူလာပါတယ်။အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းနားတဝိုက်ကဆားဝက်ခြံတွေရှိတတ်တဲ့နေရာတဝိုက်မှာ ပိုသိသာပါတယ်။ ဆားဝက်ခြံတွေကိုအကုန်ပြောင်အောင်ရှင်းသွားတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သက်သာလာတယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
တခုပြောစရာရှိတာက အနံ့နဲ့ mask ကိုရေဆေးတဲ့အချိန်ပါ။ ရွှံစေးနဲ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာကိုmaskတင်နေချိန်မှာရွှံစေးအနံ့ရပါတယ်။ တဖြေးဖြေးခြောက်လာတာနဲ့အမျှ အနံ့ကတဖြေးဖြေး ပျောက်သွားတာပါပဲ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးနံတာမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီလိုအနံ့မျိုးမခံနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ဝယ်မသုံးခင်ကြိုတင်သတိပေးချင်တာပါ။ နောက်တခုကအချိန်ပါ။ mask ကို၁၀-၁၅မိနစ်လောက်မျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားပေမဲ့ လုံးလုံးကြီးခြောက်မသွားပါဘူး။ အဲဒီအတွက် mask ကိုခွါတဲ့အခါ အဖတ်လိုက်ကွာမကြပါဘူး။ ရေနွေးနွေးစိမ်ထားတဲ့အဝတ်တခုနဲ့ လိုက်သုတ်တာအမြန်ဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးပါပဲ။ ဒါတောင် ၅မိနစ်လောက်အချိန်ယူပါတယ်။ ကျမကတော့ ရုံးပိတ်ရက် သောကြာ၊ စနေလိုနေ့မျိုးမှာပဲ ဒီရွှံစေး maskကိုသုံးပါတယ်။ ဆေးရတာကိုစိတ်မရှည်လို့ပါ။ ဒီ၂ခုကို သည်းခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးအနေနဲ့ရော အရေအသွေးအနေနဲ့ပါ တန်ပြီးသုံးပျော်လို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 07:47 No comments:
မနေ့က ဆေးရုံမှာဆေးသွားစစ်တယ်။ စိုးရိမ်တဲ့ဟာက ဘာမှမဖြစ်ဘဲ လိုလိုပိုပိုစစ်တဲ့ဟာက ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်တဲ့။ ဆေးရုံကပြန်လာပြီးကတည်းက ဒီအဖြေကိုစောင့်လိုက်ရတာ တညနေလုံး၊ တညလုံး။ သိရပြန်တော့လဲ မစိုးရိမ်ဖို့ဘယ်လောက်ပြောပြော ရင်ထဲမှာကျပ်ပြီး မျက်ရည်ကြီးပဲကျချင်နေတော့တာ။ တခုခုဖြစ်ပြီဆိုမှ ကိုယ့်ဘာကိုယ်သတိထားမိတယ်။ ဒီဘဝမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာ။
ဒါကြောင့် လူကြီးတွေဆုပေးရင် "ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ" ဆိုပြီး "ကျန်းမာ" အရင်လာတာနေမှာ။ မ ကျမ်းမာရင် လူတင်မဟုတ်၊ စိတ်ပါထိခိုက်တာဆိုတော့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိလဲမထူးဘူးမှတ်လား။ မလိုအပ်သေးပဲအများကြီးစိတ်ပူနေလို့တဲ့ ဆူတဲ့သူကဆူတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပူတယ်ဆိုတာ ပူစရာရှိလို့ပေါ့လို့ ကျမကတော့ခေါင်းမာမာနဲ့တွေးတာပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ ဘယ်သူကတော့အပျော်စိတ်ပူပါ့မလဲ။ မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် တချိန်လုံးပြောဖြစ်နေတာက အားကစားလိုက်စားဖို့၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင်စားဖို့၊ ဝိတ်နည်းနည်းလျှော့ဖို့။ လုပ်ချင်နေတာက မသေခင် လုပ်ချင်တာလေးတွေလုပ်ထားရအောင် တနေရာမှာချရေးထားဖို့။ ကျမတယောက်နဲ့လဲခက်ပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 06:002comments: